I-quartz ye-Strawberry-Umbala onomdla-Hlaziya i-2021-Ividiyo
I-strawberry quartz crystal intsingiselo kunye neempawu zokuphilisa. I-quartz eluhlaza yesitrobheli eluhlaza.
Thenga i-quarz yendalo yemvelo kwivenkile yethu
I-Quartz yenye yezona zimbiwa zininzi emhlabeni, ezenza malunga neepesenti ezili-12 zomhlaba womhlaba. Ngaphandle kwento yokuba i-quartz ixhaphakile. Kukude kuyindinisa. Ihlabathi le-quartz lahluke kakhulu. Phakathi kwezona zinto zinomdla kwihlabathi le-quartz.
Kukho ukufakwa okungaqhelekanga okufumaneka ngamanye amaxesha kwiikristali ezicacileyo. Iingcali ze-Gemologists zisebenzisa igama elithi "sagenitic quartz" ukubhekisa kwi-quartz ebonakalayo engenambala eneekristale ezifana nentsimbi ye-ofrutile, i-actinolite, i-goethite, i-tourmaline okanye ezinye izimbiwa.
I-quartz ye-strawberry eluhlaza eluhlaza
I-quartz ye-Strawberry intsingiselo kunye neempawu zokuphilisa
Ilitye lokuzalwa le-quartz ye-Strawberry
Ngaba i-quartz ye-strawberry yendalo?
Ithetha ntoni i-quartz ye-strawberry?
Ngaba i-quartz ye-strawberry iyafana ne-quartz rose?
Ivela phi i-quartz ye-strawberry?
Yintoni chakra yi-quartz ye-strawberry?
Zithini izibonelelo zestrawberry quartz?
Yintoni i-quartz ye-strawberry?
Ungayicoca njani i-quartz ye-strawberry?
Owona mzekelo we-comon yi-quartz rutilate. Iqulethe inclusions zegolide rutile okanye titanium. I-Quartz ene-inclusions ebomvu ye-iron oxide ayifumaneki kakhulu. Sisoloko sisebenzisa igama le-strawberry quartz okanye i-quartz ebomvu yomlilo.
Ezinye iisampulu zinee-inclusions ezintle kakhulu ezibonakala kuphela phantsi kokuphakanyiswa, zibolekisa i-quartz umbala obomvu ongaphezulu nangaphantsi. Abanye bane-inclus ebonakalayo ebonakalayo kwaye inokubonakala njenge-quartz ecacileyo eneenaliti ezibomvu, iiflakes okanye i-spangles.
Ifunyenwe kwiindawo ezimbalwa kuphela, i-quartz ye-strawberry ifumana imibala eyahlukileyo kuyo IHematite kwaye Lepidocrocite inclusions. Abantu abaninzi baphazamile
Eli litye lilitye le-quartz elicimiweyo, kodwa phantsi kovavanyo olusondeleyo, kuyacaca ukuba i-quartz ye-strawberry iyindalo ngokupheleleyo. Kananjalo kufanelekile ukuba uchaze ukuba igama lisetyenziswe ngendlela engachanekanga ngabathengisi bezinto zokuhombisa. Bathengisa iglasi kunye namatye obuxoki njengelitye lendalo!
Igugu linempawu ezahlukileyo ezibonakalayo. Iphelisa indawo yokuvela kuyo. Abo bathengiswa kude kube ngamadaka enemibala bonke bevela eMadagascar kwaye ba-100% bemvelo. Ngaphandle kwonyango, ngaphandle kokuphuculwa kwaye ngaphandle kokufudumeza! Ziyimveliso yemimangaliso ngokwenene kumama kamama.
I-quartz eluhlaza eluhlaza ayibikho. Ligama lezorhwebo elisetyenziswa ngabathengisi bamatye abengengabo abezamachiza. Igama lokwenyani leli litye yi-aventurine quartz. Umbala oqhelekileyo we-aventurine uluhlaza, kodwa inokuba iorenji, emdaka, tyheli, bhlowu, okanye grey.
I-fuchsite ethwele i-Chrome, iindidi ezahlukeneyo ze-muscovite mica, kukubandakanywa kweklasikhi kwaye kunika isilu eluhlaza okanye eluhlaza okwesibhakabhaka. Ii-orenji kunye nee-browns zibangelwa yihematite okanye goethite. Ngenxa yokuba i-aventurine iliwa, iipropathi zayo ezibonakalayo ziyahluka: ubunzima bayo bunokulala phakathi kwe-2.64-2.69 kwaye ubunzima bayo buphantsi kancinci kune-quartz enye ye-crystal malunga ne-6.5.
I-quartz yeCherry lilitye elinqabileyo, i-quartz e-fake ye-strawberry. yahluke ngokupheleleyo kwaye amaxabiso ahluke kakhulu, ke nceda ujonge ilitye lakho ngononophelo ngaphambi kokuba ulithenge.
Ilitye elinqabileyo elifumanekayo lincinci, ngenxa yokubonakala kwalo okungaqhelekanga, intsingiselo yekristale yequartz kunye nokuphilisa iipropathi sele zifumene umdla omkhulu kubaphilisi bekristale nakwizazi ngeenkwenkwezi. Sisebenzisa ukukhuthaza amandla entliziyo ukuzalisa imvakalelo yothando.
ILibra luphawu lwe-zodiac lwe-quartz ye-strawberry. Kulabo bazalwa ukusuka nge-23 kaSeptemba ukuya nge-22 ka-Okthobha, izinto onokuthi ufune ukuziyeka, ezinjengezinto kunye nokungazithembi, ziya kuthi shwaka. Ukuthandana ngaphakathi kwakho kuya kuvuka kwaye ufumane amathuba okufuna uthando xa ilitye lisecaleni kwakho. ikristale ivusa iitalente ezintsha ezinje ngomculo kunye nokupeyinta okanye ukubhala.
Ewe. Ilitye liyenzeka ngokwendalo. Ifumaneka kuphela eRashiya, eBrazil naseMexico. Nangona kunjalo unokufumana ukuxelisa okungamanga kweli litye, umzekelo nge-quartz ye-aventurine edayiweyo.
Ilitye eliyigugu linentsingiselo kunye neempawu ezinxulumene nothando. Abantu bakholelwa ukuba inamandla okwenza amandla entliziyo ejikeleze ibele. I-crystal inokufumana amandla othando avela ezulwini. Inokukwenza uzive uzolile ngokugcwalisa ingqondo yakho ngamandla othando.
I-rose quartz lilitye elahlukileyo. Eli litye luhlobo lwe-quartz ebonisa i-pink pink to rose red hue. Umbala uhlala uthathelwa ingqalelo ngenxa yokulandela umkhondo wexabiso le-titanium, i-iron, okanye i-manganese. Ezinye i-quartz ze-rose ziqulethe iinaliti ezincinci ze-rutile ezivelisa i-asterism ekukhanyeni okudlulisiweyo. Izifundo zakutshanje ze-X-ray zibonisa ukuba umbala ubangelwe yimicu encinci yemicroscopic ye-dumortierite ngaphakathi kwe-quartz.
Amakristalu ahlala efumaneka eRashiya nakwimimandla ekufuphi naseKazakhstan, naseBrazil naseMexico.
I-quartz ye-Strawberry inamandla kakhulu, igudileyo, kwaye inamandla okusebenza njengoko isebenza kakuhle nge-chakras ezine ngaxeshanye. Ingcambu Chakra, Solar Plexus Chakra, Heart Chakra, kunye Crown Chakra. I-quartz ye-Strawberry ikhupha amandla omnye kufuneka oyise ukomelela kunye namandla engqondo nomoya wakho.
Eli litye linako ukukhulisa injongo yomntu yothando, uxabiso kunye nesisa. Ingakhupha amandla ngaphandle kwaye ichaphazele okusingqongileyo kunye nabantu abakungqongileyo. Ilitye eliyigugu liyanceda ukutsala uthando lokwenyani okanye iqabane lomphefumlo. Kuyanceda ukulinganisa umzimba, umphefumlo kunye nengqondo.
Ikristale eluncedo kwabo bahlala befuna amandla athuthuzelayo okanye athobisayo, njengabaphilisi nabanyangi. Yikristale eya komeleza unxibelelwano phakathi kwentliziyo yakho kunye necrown chakras kwaye ubazise ngokuvisisana.
Unokucoca ilitye lakho ngeendlela ezininzi. Kububulumko ukunqanda amanzi xa ucoca ikristale yakho emzimbeni. Yihlikihle ngelaphu elifumileyo ukuba kufuneka ususe ukungcola kunye nokungcola kanye ngeveki.
I-quartz yendalo ye-strawberry iyathengiswa kwivenkile yethu yegem
I-quartz ye-Strawberry 15.90 ct
I-quartz ye-Strawberry 13.14 ct
I-quartz ye-Strawberry 8.86 ct
I-quartz ye-Strawberry 7.55 ct
I-quartz ye-Strawberry 7.33 ct
Strawberry Quartz 4.27 oka
I-quartz ye-Strawberry 9.97 ct